Dhismayaal Goobo Ganacsi ah oo Xadhiga Laga Jaray. - Cakaara News
Dhismayaal Goobo Ganacsi ah oo Xadhiga Laga Jaray.
Jigjiga(cakaaranews) talaado, 28ka June, 2016 Waxaa xadhiga laga jaray 4 masharuuc oo ah dhismayaal loogu talagalay ganacsiga yar yar ee xaafadaha maamulka magaalada jigjiga kuwaasi oo qayb ka ah mashaariicaha sanadkan 2008TI uu hirgalinayay xafiiska waraabka iyo horumarinta dooxooyinka DDSI.
Mashaariicahan dhismayaasha ah oo laga hirgaliyay goobo ka mid ah xaafadaha maamulka magaalada jigjiga ayaa waxaa si wada jir ah xadhiga uga jaray wasiirka xafiiska waraabka iyo horumarinta dooxooyinka DDSI mudane Suldaan Khayre, maayirka maamulka magaalada jigjiga mudane Axmed Maxamuud iyo wasiir ku xigeenka xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha DDSI mudane Cabdishakuur Cismaan.
Wasiirka xafiiska waraabka iyo horumarinta dooxooyinka DDSI mudane suldaan khayre oo xadhig ka jarkii ka dib la hadlayay warbaahinta DDSI ayaa sheegay in qayb ka yihiin 30 mashruuc oo ah dhismayaal loogu talagalay ganacsiga yar yare ee lagu horumarinayo iskaashatooyinka yar yar ee dhalinyarada DDSI laguna dhimayo shaqo la aanta iyo saboolnimada kuwaasi oo laga hirgalinayo maamulada magaalooyinka DDSI.
Waxaa kale oo uu sheegay wasiirku in mashaariicahan oo ahaa mashaariicihii sanad miisaaniyeedka 2008TI ay ahaayeen kuwa marka koowaad shaqo abuur u noqday iskaashatooyinka dhalinyarada fursado shaqana ay ka heleen dhalinyarada xiligii ay dhismayaasha socdeen sidoo kalena ay u noqon doonaan goobo ganacsiyada yar yar ay ka faa’iidaysan doonaan iskaashatooyinka dhalinyarada DDSI